ကော်လိုရာဒို WIC | JPMA, Inc
သူကားအဘယ်သူ Call မှ
လျှင်သင့်ရဲ့ WIC ဆေးခန်း Call ...
သငျသညျ WIC အစားအစာများသို့မဟုတ်ပမာဏနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကိုရှိသည်။
သင် WIC ရှေ့၌ဖြစ်ပါတယ်ထင်တဲ့အစာကိုဝယ်နိုင်ခဲ့ကြဘူး။
မှာအလိုအလျောက်ဖုန်းကိုလိုင်း Call 1-844-234-4950 လျှင် ...
သင်သည်သင်၏ PIN ကို reset သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ PIN ကိုပြောင်းပေးပါ, ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသင့်ဒေသခံ WIC အစီအစဉ်ကိုပဌနာ! သူတို့ကသင့်ရဲ့အစားအစာကိုအကျိုးခံစားခွင့်ကို အသုံးပြု. ထံမှမည်သူမဆိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးကဒ်အသစ်အရကူညီပေးပါမည်။
အဘယ်အရာကိုငါ့အ card ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဆိုရငျကော
သင့်ရဲ့ကဒ်သို့မဟုတ်သင့်ဒေသခံ WIC အစီအစဉ်၏နောက်ကျောအပေါ်သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကိုခေါ်ဆိုပါ။
အဆိုပါ WIC ရုံးမှာ loaded လက်ရှိစားနပ်ရိက္ခာအကျိုးကျေးဇူးများကိုချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ လာမည့်လများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကျိုးကျေးဇူးများကိုအစအဦးနေ့စွဲအပေါ်သန်းခေါင်မှာသင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ပေါ်သို့အပ်နှံလိမ့်မည်နှင့်အဆုံးသတ်ရက်စွဲအပေါ်သန်းခေါင်မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
သင့် eWIC ကဒ်များကိုသိမ်းဆည်း! အားလုံးသင့်ရဲ့ WIC အစားအစာများကိုဝယ်ယူခဲ့ကြတောင်မှအခါ, သင့်ရဲ့ကဒ် re-အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးခံစားခွင့်များသင်၏နောက်ထားတူညီ eWIC ကဒ်နှင့်အတူဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။
သင်ဆန္ဒရှိလျှင်သင်တစ်စုံတစ်ဦးကအခြားဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကိုသင်ကသင်၏ eWIC ကဒ်နှင့် PIN ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီသင်ယုံကြည်စိတ်ချရသူတစ်ဦးဦးဖြစ်ပါတယ်သေချာအောင်!
လူအပေါင်းတို့သည် WIC အစားအစာများကိုဝယ်ယူကြသည်မဟုတ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ကိုနောက်တစ်လကျော်လှိမ့်ကြမည်နည်း
English သို့မဟုတ်စပိန်အတွက်ကော်လိုရာဒို WIC အစားအသောက်စာရင်းကိုကြည့်ရှုရန်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကလစ်နှိပ်ပါ။
အဘယ်မှာရှိ Enfamil Buy မှ
သင့်ရဲ့ Balance ကိုစစ်ဆေးခြင်း
သင်သည်သင်၏ account ကိုချိန်ခွင်လျှာနည်းလမ်းများစွာစစ်ဆေးနိုင်သည်
သင့်လက်ရှိအကြိုးခံစားခှငျ့ကြည့်ရှုဖို့ WICShopper app ထဲမှာ "ကြှနျုပျ၏အကျိုးကျေးဇူးများ" option ကိုသုံးပါ။
တစ်ဦးကုန်စုံစတိုးဆိုင်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ကြည့်ရှုပါသို့မဟုတ်သင့်လက်ရှိချိန်ခွင်လျှာထဲကပုံနှိပ်များအတွက် Customer Service Desk သွားပါ။
ချိန်ခွင်လျှာစုံစမ်းရေးကော်မရှင်အဘို့သင့် eWIC ကဒ်၏နောက်ကျောအပေါ်သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကိုခေါ်ဆိုပါ။
အလည်အပတ် www.ebtedge.com သင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့် print ထုတ်ရန်။
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်နှင့်အတူစျေးဝယ်
ငွေသွင်းငွေထုတ်ရဲ့အစမှာသင့်ရဲ့ eWIC Card ကိုပွတ်ဆွဲပါ။
သင့်ရဲ့ PIN ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်ခလုတ်ပေါ်ရိုက်ထည့် button ကိုနှိပ်ပါ။
သငျသညျယ်ယူသီးသောအသီးအနှံအကောင်းဆုံးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အတည်ပြုအစားအသောက်ပစ္စည်းများနှင့်ဒေါ်လာစျေးပမာဏ၏ပမာဏကိုသင့်ရဲ့ WIC အကောင့်မှနုတ်ယူလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ငွေပေးချေမှုမဆိုအခြားပုံစံများမတိုင်မီပွတ်ဆွဲပါ။
မဆိုကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေငွေသား, EBT, SNAP သို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်ကလက်ခံပေးချေမှုတခြားပုံစံတွေနဲ့ paid နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက PIN ကိုကဒ်နှင့်အတူသင့် WIC အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုထားကြောင်း, ဂဏန်းလေးလုံးလျှို့ဝှက်ချက်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ PIN ကိုရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာတစ်စုံတစ်ဦး (ဥပမာ, သင့်မိဘ၏သို့မဟုတ်ကလေး၏မွေးနေ့) ထုတ်တွက်ဆရန်အဘို့အလေးသင်မှတ်မိဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်များ, ဒါပေမယ့်ခက်ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ကဒ်အသုံးပြုချင်ကြဘူးကြောင်းမည်သူမဆိုရန်သင့် PIN ကိုမပေးပါဘူး။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ PIN ကိုသိတယ်နှင့်သင်၏ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသင်၏အစားအစာအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရန်သင့်ကဒ်ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါကထိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုအစားထိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။
အဘယျသို့အကြှနျုပျသ PIN နံပါတ်မေ့လျော့သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်?
သင်သည်သင်၏ PIN ကိုနည်းလမ်းများစွာပြောင်းလဲစေနိုင်သည်
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်၏နောက်ကျောအပေါ်သေဆုံးသူအခမဲ့အရေအတွက်ကိုခေါ်ဆိုပါ။
အဘယ်သို့ငါမှား PIN နံပါတ်ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင်?
သင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းဖို့မကြိုးစားကြဘူး။ မှန်ကန်သော PIN ကိုစတုတ္ထပါအပေါ်ထဲသို့ဝင်မပါရှိဘူးဆိုရင်, သင့် PIN ကိုသော့ခတ်ပါလိမ့်မည်။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းနှင့်သင့်အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ရတဲ့နေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်ပြုမိသည်။ သန်းခေါင်တိုင်အောင်သင့်ကဒ်ချောင်းမြောင်းသော့ဖွင့်ရန်နှင့်သင့်အကောင့်ကိုအလိုအလျောက်သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။
, ခွဲခြားဆက်ဆံမှု program တစ်ခုတိုင်ကြားချက်မှာအွန်လိုင်းကိုတွေ့ကြံ့ဖွံ့အစီအစဉ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတိုင်ကြားချက် Form ကို, (AD-3027) ဖြည့်စွက်ရန်: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html နှင့်မဆိုကြံ့ဖွံ့ရုံးမှာ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကိုရေး အက္ခရာကြံ့ဖွံ့မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနှင့်စာတစ်စောင်အတွက် form မှာတောင်းဆိုထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးပေး။ တိုင်ကြားချက်ပုံစံများ၏မိတ္တူကိုတောင်းဆိုဖို့, (866) 632-9992 ခေါ်ဆိုပါ။ : သင်၏ပြီးစီးခဲ့ပုံစံသို့မဟုတ်စာအားဖြင့်ကြံ့ဖွံ့ဖို့ Submit
(1) မေးလ်: စိုက်ပျိုးရေးကိုအမေရိကန်ဦးစီးဌာန
(3) ကိုအီးမေးလ်: program.intake@usda.gov.